YEYINTNGE(CANADA): Saturday, March 16
အောင်ဆန်းသမီး ရလိုက်တာ အလွန်ကံကောင်းခြင်း(သီတဂူဆရာတော်ကြီး)
လက်တလော လက်ပန်တောင်းတောင်.. အရေး ဖြေရှင်းပေးနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား လက်ပန်တောင်းတောင် ဒေသမှ တချို့ချို့သော သူတွေရဲ့ ၀ိုင်းအော်၊ ၀ိုင်းကန့်ကွက်ခဲ့တာနဲ့ ပက်သက်ပြီး သီတဂူဆရာတော်ကြီး မိန့်မှာထားသည်မှာ အလွန့်လွန်ကောင်းလှသည်၊ တန်ဖိုးကြီးမားသည့် မိန့်ခွန်းဖြစ်သောကြောင့် ပြည်သူများ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အသံဖိုင်မှ စာအဖြစ် ကူးပြီး တင်ပါသည်။
အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ခွင့်လွတ်ကြပါ...
ဒို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းကို တိုတိုလေးပြန်ကြည့်၊ ငါအခု ပုဂံမှာ အနားယူနေတာ၊ မင်း လာမေးတော့ ငါကလဲပဲ ပြောချင်စိတ်ပေါက်နေတာ၊ စိတ်ထဲမှာ ပင်ပန်းလွန်းလို့။ “တိုင်းပြည်အတွက် ဒီလောက်စွန့်လွတ်တဲ့ သူကို ၀ိုင်းပြီး ရန်တွေ့တာ စိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းတယ်။” ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို ပထမဆုံး စည်းလုံးခဲ့တာ အနော်ရထာ မို့လားကွ၊ အနော်ရထာဟာ အေဒီ ၁၁ ရာစုဆိုတော့ ဒို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စည်းလုံးမှုဟာ အင်္ဂလိပ် အမေရိကန်တို့ထက် သက်တမ်း ရှည်ပြီကွ၊ နှစ်ပေါင်း ၉၀၀ ရှိပြီ။ အဲဒီ အနော်ရထာ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ တည်ထောင်ထားခဲ့တဲ့ United Myanmar ကို ဖျက်စီးပြစ်ကြတာတော့ ပုဂံသမိုင်းမှာ ပြန်ဖတ်၊ တိုတိုလေး၊ ငါပြောမယ်၊ သီဟပတိဆိုတဲ့ ဘုရင်နှင့် နရသူဆိုတဲ့မင်းပဲ၊ မင်းနှစ်ပါးအကြောင်း အကျယ်မပြောဘူးကွာ၊ ပုဂံသမိုင်းမှာ အဲဒီမင်းနှစ်ပါးကို ဘယ်လိုရေးထားလဲ။ သီဟပတိမင်းကို ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ တရုပ်ပြေးမင်းလို့ခေါ်တယ်။ နရသူကိုတော့ ကုလားကျမင်းလို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒါဟာ ဒို့နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေ သိပ်သတိထားရမည့် အချက်ပဲ။ တရုပ်ပြေးမင်းနှင့် ကုလားကျမင်း အဲဒီမင်းနှစ်ပါးတို့ကြောင့် အနော်ရထာ စုစည်းညီညွတ်စွာ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာ အစိပ်အစိပ်အမွှာမွှာ ပျက်စီးခဲ့တယ်။
Credit by သီတဂူစတား
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/16/20130အကြံပြုခြင်း
အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာအပေါ် ဆေးဝါးကုသမှုခံနေရသော ဦးတိက္ခဥာဏ၏သားသဘောထား
by Nay Thiha (Notes) on Saturday, March 16, 2013 at 10:20am လက်ပံတောင်းတောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာထွက်ရှိလာပြီးနောက် ထိုအစီရင်ခံစာကို ကန့်ကွက်သူ၊ ထောက်ခံသူများရှိသလို ကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကန့်ကွက်သူ၊ ဆန္ဒပြသူများရှိသလို သနားကရုဏာသက်သူများလည်းရှိခဲ့သည်။
The Choice -အမေစု၏ မိသားစု သူငယ်ချင်းတချို့ရဲ့ ပြောပြချက်တွေ
Spring Flowers's photo.
‎( ဟီလာရီ ကလင်တန် ) ။ ။ သူမဟာ အခု စွန့်စားမှုတရပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကတော့ သံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် အစိုးရက တကယ်လုပ်ချင်စိတ်ရှိသလားဆိုတာကို သိဖို့နဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို အားပေးဖို့ ဒီလို လုပ်မှလည်း ဖြစ်မယ်လေ ။ ဒီလိုမှ မလုပ်ရင် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာဘာလဲဆိုတာလည်း သူသိပါတယ် ။ နောက်ရွေးချယ်မှုဆိုတာကတော့ အခြေအနေတွေ အရင်အတိုင်းဘဲ ပြန်ဖြစ်သွားရုံပေါ့ ....အနားယူသွားတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေနေရာမှာ စစ်ခေါင်းဆောင်မျိုးဆက်သစ်တစ်ခု ၀င်လာမယ် ။ ၊ တိုင်းပြည်ပွင့်လင်းတိုးတက်လာတာလည်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူး ၊ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အနာဂတ်ကို သွားဖို့ လမ်းလည်း ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး .......ဒါတွေကို သူလုံးဝ နားလည်ပါတယ် ။
Aung San Suu Kyi : The Choice ဆိုတဲ့ documentary ကို ကိုဗညား Ba Nyar က စာတန်းထိုးလို့ ပြီးသွားပါပြီ ။ တကယ်တော့ ဘာသာပြန်ပြီး သူ့ကို ပေးထားတာ အတော်ကြာပြီ .....သ...ူလည်း အလုပ်တွေပိနေတာနဲ့ ပေါ်မလာပေါ်မလာ.... ကြာတော့ မေ့တေ့တေ့တောင် ဖြစ်နေပြီ ။ ဒီနေ့မှ ဆိုင်းမဆင့်ဘုံမဆင့် ပြီးပြီလို့ သိလိုက်ရတော့ အတော်လေး ၀မ်းသာသွားမိပါတယ် ။ မအားတဲ့ ကြားက သတိတရ စာတမ်းထိုးပေးတာကို အလွန်တရာ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ။ အရင်က ဒေါ်စုရဲ့ Rule of Law ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပြောသွားတဲ့ ယေးလ်တက္ကသိုလ် မိန့်ခွန်းရယ် ၊ CNN မှ ဒေါ်စု အင်တာဗျူးတွေကိုလည်း သူကဘဲ လိုလိုလားလား မြန်မာ စာတန်းထိုးပေးခဲ့တာပါ ။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးလာသော ဘင်္ဂလီ အနည်းဆုံး ၅ သိန်းကျော် ရှိကြောင်း ၀န်ခံ
ဖော်ပြပါပုံသည် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာ ဂျက်လိုင်ဒါ ၏ ဟောပြောချက်ထဲတွင် ဖော်ပြထားသော ဆလိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ ဗြိတိသျှသံရုံး၏ မှတ်တမ်းကို ကိုးကား၍ ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းမှတ်တမ်းအရ ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသံအမတ် မစ္စတာ ကေ အမ် ကိုင်ဇာ သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထူထောင်ရေးစစ်ပွဲကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးလာသော ဘင်္ဂလီ အနည်းဆုံး ၅ သိန်းကျော် ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် တရားမ၀င်ခိုးဝင်လာသူများကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်နှင်ထုတ်နိုင်ကြောင်း၊ သို့သော် ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် လက်ရှိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာများကို ထောက်ရှု၍ ငဲ့ညှာပါရန် မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များကို တောင်းပန်ခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် အဆိုပါကိစ္စအား မကိုင်တွယ်သေးသည့်အတွက် ကျေနပ်မိကြောင်း ပြောဆိုသည်ဟု အဆိုပါ ဗြိတိသျှမှတ်တမ်းက ဆိုထားသည်။
ယနေ့လွှတ်တော်မှ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်များ (အများစု လား တချို့လား စဉ်းစားကြပါကုန်။) တာဝန်မဲ့နေကြသကဲ့သို့ ဗိုလ်နေ၀င်းအစိုးရသည်လည်း ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီကို မနှင်ထုတ်ခဲ့ပဲ နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်ခြာအာဏာကိုသာ အထိပါးခံခဲ့ကြသည်။ နယ်စပ်မြို့များ ဘင်္ဂလီလက်ထဲသို့ ကျရောက်ရန် ကူညီရာ ရောက်ကုန်ကြသည်။ အပ်နှင့် ထွင်းရမည့် အရာများကို မထွင်းခဲ့သည့်အတွက် အခုအချိန်မှာ ပုဆိန်နှင့်ပဲ ပေါက်ရမလို ဖြစ်နေကြရပြီ။
ဆို့ဆန်ရှင်ကြားကသွားလုပ်နေတဲ့အိုင်ဗင်ဟိုးကိုCanadian friends of Burmaကနေဦးဆောင်
ဒီပွဲနဲ့ ဒေါ်စုကို အထိနာလောက်အောင် ထိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ရင်တော့ တကယ့်ကို အလွဲကြီး လွဲသွားပါပြီ .....
အောင်ဆန်းသမီး ရလိုက်တာ အလွန်ကံကောင်းခြင်း(သီတဂူဆရာ...
အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာအပေါ် ဆေးဝါးကုသမှုခံနေရသော ဦးတိက္ခ...
The Choice -အမေစု၏ မိသားစု သူငယ်ချင်းတချို့ရဲ့ ပြေ...
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးလာသော ဘင်္ဂလီ အနည်းဆုံး ၅ ...